China Microfiber akwa nhicha maka kichin, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ụgbọ ala na ndị na-emepụta |Leze
Microfiber ihicha akwa maka kichin, ụlọ ọrụ na ụgbọ ala
Ojiji: Ụgbọ ala Ngwa: Ụgbọ ala
Ihe: Microfiber Njirimara: Na-adigide
Nọmba nlereanya: C134 Agba: ahaziri
Ikike inye: 20000000 Iberibe/Iberibe kwa izu
Nkọwa nkwakọ ngwaahịa akpa elu + katọn
Etiti oge 20 ọrụ ụbọchị mgbe nkwụnye ego
Anyị nwere ike ịnye ngwaahịa dị ka arịrịọ ndị ahịa si dị. dị ka akpa OPP, katọn dị n'ụdị dị iche iche, yana ụdị ngwugwu ndị ọzọ nke ndị ahịa chọrọ.
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Shijiazhuang Leze Trading Co., Ltd.dị na Qixi District nke Shijiazhuang - obodo a ma ama na-emepụta akwa akwa.Ụlọ ọrụ anyị na-enweta nnukwu njem njem nke G4 Expressway, Huangshi Expressway, Railway na Zhengding International Airport.
Ụlọ ọrụ anyị nwere nkà na ụzụ na mmepụta ngwá ọrụ kachasị elu na otu ọkachamara mmepụta ihe.Anyị na-emepụta akwa akwa microfiber, akwa akwa mma, akwa nhicha ihu, akwa akwa na akwa akwa akwa, ụdị amdny maka ngwa honme.Anyị nwekwara ike ịmepụta usoro microfiber nke ngwaahịa nwere textures dị iche iche, nkọwa, ụdị na agba dị ka ihe ndị ahịa anyị chọrọ.
N'ihi nhọrọ siri ike nke ihe mgbe anyị na-eji ọrụ nrụpụta dị elu, ngwaahịa anyị na-ere nke ọma na Japan, Korea, Taiwan Area, Hong Kong, Southeast Asia, Middle East, Austria, Europe, India, South Africa na obodo na mpaghara ndị ọzọ.Ngwaahịa anyị enwetala aha ọma n'aka ndị ahịa anyị afọ ndị a.
Anyị na-ahụta kredit azụmahịa na mmasị ndị ahịa dị ka akụkụ anyị kachasị mkpa na imekọ ihe ọnụ ma jiri ezi obi na-anabata ndị ahịa si n'ebe niile n'ụwa ka anyị na anyị nwee mmekọrịta dị ogologo.
A na-ewu ụlọ ọrụ anyị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 10, anyị bụ ndị nrụpụta microfiber ọkachamara.
Q2: Ị na-anabata OEM?
Ee, n'ezie, ị nwere ike izipu m gị imewe ma ọ bụ sample ma ọ bụ foto, anyị nwere ike m, ime dị ka gị nkọwa arịrịọ.
Q3: Ị na-anabata usoro nlele?
N'ezie anyị na-eme. ị nwere ike idowe usoro nlele iji lelee àgwà na ọrụ.
Q4: Ị na-enye sample free?
Ee, anyị na-eme.dị ka ọrụ ụlọ ọrụ anyị si dị, anyị na-enye gị nlele n'efu, mana ụlọ ọrụ ị na-akwụ ụgwọ kwesịrị ịkwụ ụgwọ ibu ibu. anyị ga-eweghachi gị ego ahụ mgbe i tinyechara anyị iwu mbụ.
Anyị na-aga ọtụtụ ụdị ngosi, Cantonfair, East China ngosi, na ọtụtụ ngosi ná mba ọzọ.
n'okpuru bụ nke ikpeazụ ngosi.
Uwe Microfiber kacha mma
akwa mkpuchi ụgbọ ala
Akwa Microfiber dị mma
Towel Microfiber kacha na-amị amị
Na-asa akwa akwa Microfiber
Igwe ihe eji emepụta ihe na-adọrọ adọrọ nke ukwuu...
Ihe Microfiber na Njirimara Eco-Friendly Di...
Akwa Microfiber na-ehicha akwa absorbent
towel microfiber ebipụtara omenala